Madaxweyne Joe Biden oo muwaadin soomaali ah xil sare umagacaabay iyo waxyaabaha lagu xushay. | Warbaahinta Ayaamaha
Madaxweyne Joe Biden oo muwaadin soomaali ah xil sare umagacaabay iyo waxyaabaha lagu xushay.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden Xamse Warfaa oo ah wiil Soomaaliyeed u magacaabay inuu noqdo la-taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda Mareykanka.
Xamse Warfaa ayaa sheegay in uu horay ulasoo shaqeeyay Joe Biden, howlo baaxad lehna uu usoo qabtay.
“Ma aha markii ugu horreysay ee uu xiriir na dhex maro maamulka madaxweyne Biden, xilligii uu ku jiray tartanka siyaasadda, laga billaabo bishii saddexaad ee sanadkii 2020-kii, waxaan ahaa la taliyaha dhaqaalaha ee ololihii madaxweyne Biden, marka xiriir hore oo toos ah ayaan la lahaa.
“Sidaan ognahay xilligan aan ku jirno waa mid xasaasi ah, isbadallo waaweyn ayaa ka dhacay gudaha Mareykanka, geeska Afrika iyo caalamka intiisa kaleba. Tani waa fursad qaali ah oo aanu ku hormarineyno dimuqraaddiyadda, islamarkaana ku xoojineyno xuquuqul insaanka.